अब १० बर्ष भारतको नाकाबन्दी होस्, नेपालले भयंकर प्रगती गर्छ (भिडियो) « Swadesh Nepal
अब १० बर्ष भारतको नाकाबन्दी होस्, नेपालले भयंकर प्रगती गर्छ (भिडियो)
हामी एक गाँसमा कति विष खान्छौं ?
तपाई हामीले प्रयोग गर्ने भान्सा अहिले विषादीको भण्डार बनिरहेको छ । हाम्रो भान्सामा भित्रिने कति विदेशी वा स्वदेशी तरकारी, फुलफुल लगायतका खाद्य सामाग्रीको विषादी परिक्षण गरिएकै हु“दैन । यसका कारण हामी दैनिक खानास“गै बिष पनि खाइरहेका छौ ।
मानव जीवनमा गम्भिर असर पार्ने यस्तो विषादीको प्रयोग रोक्न न त हाम्रँे सरकारी संयन्त्र सक्षम छ । न विदेशबाट गुणस्तर मापदण्ड पुरा गरेका सामग्री मात्र नेपाल भित्रिने सुनिश्चिता छ ।
यस्तै अवस्थामा अहिले भारतबाट आयात हुने तरकारी, फलफुल लगायतका सामग्रीको बिषादी परिक्षण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयको विवाद चर्किएको छ । कुनै बेला भारतको नाकाबन्दीको सामाना गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले राजदूतावासको एउटा पत्रका कारण मानव जीवनमा गम्भिर असर पार्ने बिषादी परिक्षणको निर्णयबाट पछि हटेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । र यो निर्णयलाई लिएर सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरु नै एकमत छैनन् ।
कुनै समय कृषि प्रधान भनेर चिनिने मुलुक अहिले किन खाद्यानमा परनिर्भर हुनुपरिरहेको छ । किन हामीले आफ्ना लागि समेत उत्पादन गर्न सकेनौ र अर्काको विषादीयुक्त उत्पानद खाइरहेका छौ ? हाम्रो कृषि प्रणालीमा कस्ता समस्या छन् ?
बर्षेनी कृषि अदुदानमा अर्बौ रुपैया लगानी गरिपनि किन त्यो बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र संविधानमा लेखेर मात्र हुन्छ कि त्यस अनुसारको व्यवहार पनि हुनुपर्छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न टफटकमा हुनुहुन्छ कृषि बैज्ञानिक मदन राई ।